क्म्युनिष्ट जेट, गोविन्द र गंगामाथि
काठमाडौं । नेकपा जेटका दुई पाइलट प्रचण्ड र केपी ओलीले गंगामाया“ र डा.गोविन्द केसीको ज्यानमाथि जेट लेण्ड गर्ने सूर कसेका छन् । झापा विद्रोहका बेला मान्छे काटेका ओली र जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मारेका प्रचण्डका लागि यी दुईको ज्यानको मूल्य कति होला र ? यसकारण त दुवैले चोचोमोचो मिलाएर मेडिकल कलेज खोज्न दिइन्छ, संक्रमणकालीन मुद्दाको छिनोफानो मेलमिलापबाटै टुंग्याइन्छ भनेका छन् ।
गंगामाया“ र डा.गोविन्द केसीको राज्यस“ग न्यायका लागि युद्ध हो । यो युद्धमा देखिने र नदेखिने समर्थन यिनैस“ग छ, सरकारस“ग संसदको दुईतिहाई बहुमतमात्र देखिन्छ । जनताले जित्छन् कि जनताका प्रतिनिधिले ?
प्रतिनिधि बन्नुभनेको महाराजा बन्नु होइन । न त जनताले श्री ३ राणालाई दिएको जस्तो पञ्चापत्र नै हो । नेपाली जनता कुनै पनि बेला सडकमा उत्रन सक्छन् र विदेशी ताकत समेत अमानवीयता असह्य भएर हस्तक्षेप गर्दै आउन सक्छन् । यसको अन्दाजा दुई तिहाईको दम्भ पालेकोलाई नभएको हुनसक्छ ।
नेकपा जेट प्लेनको इन्धन भनेको जनताको समर्थन नै हो । जनताले समर्थन फिर्ता लिने प्रावधान नभए पनि जनता सडकमा उत्रिए भने दुई तिहाईको फुर्ति प्राविधिकमा सिमित हुनसक्छ । त्यसैले पाइलटद्वय ओली र प्रचण्ड, गंगामाया“ र डा.गोविन्द केसीको जीवनमाथिको जेट लेण्डिङको मूल्य महगो पर्ला, चुकाउनु पर्ला है ।